Ogige nke Okwu, a ghaghị ịhụ na Tokyo | Akụkọ Njem
.Nnɛ Japan Ọ bụghị naanị maka sushi, samurais ma ọ bụ Fujisan mara ya, ugwu nsọ ya na akara ngosi mba, kamakwa maka ogo ya animated fim na usoro. Anime ahụ ejirila ụwa ruo ogologo oge na n'eziokwu, ozugbo ị rutere n'ọdụ ụgbọ elu Narita nke International, ị nwere ike ịrara njem gị iji mata ebe ndị ahụ anime mere ka a mara n'ụwa niile n'ihi na a na-enye maapụ njem nleta gbasara anime na manga.
Onwe ya Anime fim na ihe kacha masị m maka nwa oge ugbu a bụ Ogige nke Okwu, a obere okike e setịpụrụ na otu n'ime ihe ndị kasị mma ubi na Japan: na Shinjuku Gyo-en. You na-aga Japan? Mgbe ahụ, akwụsịla ịgagharị ya.
1 Ogige nke Okwu, anime
2 Shinjuku Gyo-en Ogige
3 Gaa na Shinjuku Gyoen
Ogige nke Okwu, anime
Ọ bụ nkenke 2013 animated nkiri kpọọ na japan Kotonoha no Niwka. Edere ya ma duzie ya site na nnukwu Makoto Shinkai na egwu mbu ya bu ihe di ebube nke ga adigide n'isi gi ogologo oge.
Akụkọ a na Nwa nwoke 15 dị afọ Takao Akizuki onye rọrọ nrọ ịbụ onye mmebe na onye nrụpụta akpụkpọ ụkwụ na mmekọrịta dị iche ọ na - enwe na Nwaanyị dị afọ iri abụọ na asaa aha ya bụ Yukari Yukino. Ha na-ezukọ n'otu n'ime pavil mara mma nke Shinjuku Gyo-en na Ogige ahụ mara mma si otú a ghọọ ọnọdụ nke mmekọrịta na-etolite ma na-ejide n'agbanyeghị ihe niile, ihe omimi, ịgbachi nkịtị na afọ dị iche.
Nhọpụta ahụ dị na ụbọchị mmiri ozuzo. Na June 1, mmiri ozuzo na-amalite na Japan nke na-ewe ihe dị ka otu ọnwa ebe ọtụtụ ụbọchị n'izu na-ezo. N'ụbọchị ndị ahụ, Takao na-amafe klas mgbe niile wee gaa n'ubi ahụ iji chepụta akpụkpọ ụkwụ yana maka ụfọdụ ihe kpatara ya na ọ dịghị ekwupụta na ọ bụ otu ụbọchị mmiri ozuzo ahụ na ọ dara n'ubi ahụ ị toụ biya ma rie chọkọletị. Dị ka a ga - asị na ha abụọ enweghị ọrụ ma ọ bụ ibu ọrụ ndị ọzọ.
Nke nta nke nta akụkọ na-agbasa ma ndị na-ege ntị na-amụta nkọwa ndị ọzọ Yukino adịghị agwa ya aha ya mgbe Takao na-ekwupụta nrọ ya niile. Abụọ ndị owu na-ama na ndị nwere nwayọ nwayọ nwayọ, na nzukọ ndị ahụ na okwu ndị ahụ, na-apụta na nsogbu ha.
Ka anyị na-erule na ngwụcha ihe nkiri a, anyị chọpụtara na Yukino bụ onye nkuzi akwụkwọ akwụkwọ Japanese na otu ụlọ akwụkwọ ahụ Takao na-aga, n'agbanyeghị na ọ maghị ya, na ya na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nwere anyaụfụ nwere nsogbu, ọ bụ ya mere o ji wute ya nke ukwuu na ya kwụsịrị ịga ụlọ akwụkwọ.
Mgbe mmiri na-ezo na ha na-ekerịta nri ehihie na ụlọ Yukino, mgbe idei mmiri na-amanye ha ịgbapụ n'ogige ahụ, Takao kwupụtara ịhụnanya ya mana Yukino na-ejigide ebe dị anya na-ewute nwata ahụ ma mee ka ọ gbaa ọsọ mgbe ọ tiri mkpu na iri anọ. Oh, ngwụcha ahụ magburu onwe ya n'ihi na mgbe ị chere na ihe ahụ agwụla, ọ na-agbaso ya na mmiri ozuzo. Agaghị m agwa ndị ọzọ n'ihi na achọghị m imebi mana…. echefula ya!
Shinjuku Gyo-en Ogige
Ọnọdụ ebumpụta ụwa maka Ogige nke Okwu bụ ogige mara mma n'akụkụ a nke Tokyo, Shinjuku. N'oge ndị ọzọ, ihe karịrị otu narị afọ gara aga, Ọ bụ ogige nke ezinụlọ ọgaranya Naito mana emesia ọ gafere n’aka ezinụlọ eze ma mesịa bụrụ onye ọha.
Nhazi nke ogige ahụ sitere na ọkara nke abụọ nke narị afọ 1906 na otu narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụkwa ogige botanical. Nhazi nke ugbua sitere na XNUMX obu ezie Mwakpo ikuku nke ndị America na 1945 bibiri ya kpamkpam ma ọ ga-ewughachi ya mgbe agha ahụ bisịrị. Ọ bụ Na 1949, emepere ya ọha na eze dika Shinjuku Gyoen, "ubi alaeze."
Ogige a nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hectare 60 ma gbaa gburugburu kilomita 3.5. Styleszọ atọ dị iche na ya, maka ogologo enwere Ngalaba ogige French, Japan ọzọ na Bekee ọzọ. Ọ bụrụ na ị gaa Japan maka Hanami, okooko osisi cherry oge ochie, nke a bụ ebe dị mma iji hụ ya. Ngalaba ndị Japan nwere nnukwu ọdọ mmiri nwere agwaetiti na akwa na ọtụtụ pavil. Ngalaba French na Bekee mepere emepe na osisi.
Ubi ahụ o nwere puku iri abụọ na n’ime ha ihe karịrị ọkara bụ osisi cherry, enwekwara osisi cedar Himalayan, cypresses na ọta akara mara mma nke malitere n’afọ ndị 50, bụ́kwa ebe obibi nke ihe dị ka ụdị ahịhịa na okpuru mmiri 1700. Oge ọzọ dị mma iji gaa n'ogige ahụ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, maka ocher, odo na ọbara ọbara nke osisi.
Gaa na Shinjuku Gyoen
Naanị ihe na-adịghị mma bụ na ogige a na-emechi n'echiche m n'isi mmalite: 4.30 pm. Na oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n’oge ọkọchị, ọ jọgburu onwe ya ịghara inwe ike ịga ebe ahụ ka a ghara ịghọta ihe kpatara na ha anaghị agbatị oge mmeghe.
Ubi ahụ O nwere ọnụ ụzọ mbata atọ, Okido, Shinjuku na Sendagaya. Ọnụ ụzọ Shinjuku dị naanị ije nkeji iri site na JR Shinjuku nke New South Exit ma ọ bụ nkeji ise site na Shinjukugyoenmae Station na Marunouchi Subway Line. Ọnụ Okido bụkwa njem ije nkeji ise site na ọdụ ndị a na Sendagaya bụ otu ihe ahụ site na ọdụ otu aha na JR Chuo-Sobu Line.
Nwere ike ịbanye site na elekere 9 nke ụtụtụ mana anaghị aga na Mọnde n'ihi na ọ mechiri emechi, belụsọ n'etiti ngwụcha ọnwa Machị na mbido Eprel, maka hanami, na mbido ọnwa Nọvemba, nke na-emeghe izu niile. Lọ akwụkwọ na-eto eto na-emechi tupu mgbe, na elekere anọ nke ehihie.
Ogige ahụ na-emepe site na 9 nke ụtụtụ ruo 4:30 nke mgbede ọ bụ ezie na a nabatara ntinye naanị ruo 4. Emechiri na monday ma ọ bụ n’echi ya ma ọ bụrụ na Mọnde bụ ụbọchị ezumike nakwa site na December 29 ruo Jenụwarị 3. Onu uzo ahu di oke onu ahia, obere 200 yen nke dị ihe dịka dollar 2.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Ubi nke Okwu, a ga-ahụ na Tokyo